SAWIRO:Dowladda Federaalka Oo Xafiiskeeda Socdaalka ka furatay Balambale | Afrikada
SAWIRO:Dowladda Federaalka Oo Xafiiskeeda Socdaalka ka furatay Balambale
Afrikada, Balambale: Dowladda federaalka ayaa xafiis ka furatay magaalada Balanbale ee ismaamulka Galmudug. Hey’adda socdaalka iyo jisniyadda ayaa sheegtay in la fulin doono howlaha la xiriira xuduudaha iyo eegidda waraaqaha ajnabiga ee degaannada xuduudaha.
Munaasabda xariga looga jarayay xafiiska ayaa waxaa ka soo qeybgalay maamulka degmada Balambale , shacabka degmada iyo saraakiil sare.
Waxaa ay dhamaantood sheegeen in baahi weyn loo qabay howlaha ay qaranka u heyso Hay’adda socdaalka iyo jinsiyadda isla markaana ay uga mahadcelinayan masuuliyiintii ka soo shaqeysay in xafiiskan la furo.
Hay’adda socdaalka Jinsiyaddaha Soomaaliya ayaa bilihii lasoo dhaafay ballaarisay shaqadda ay heyso bulshadda Soomaaliyeed, waxaana Xafiisyo loogu adeego bulshadda ay ka furatay meel badan oo ka mid ah Soomaaliya.
Waxaa maalmihii ugu dambeeyay isa soo tarayey ajnabiga ku soo qulqulaya wadanka Soomaaliya iyaga oo u soo tahriibaya dalkeenna, tani ayaa muhiim ka dhigeysa in xafiisyada socdaalka jinsiyadda ee xuduudaha aad loo qalabeeyo si loo bixiyo waraaqaha dowladda isla amrkaasina dadka loo gaarsiiyo howlaha dowladda.
Intaa ku daro oo, Soomaalida oo federaal ah hadana lama maqlo wasaarad bixisa adeegga isku xirka gobollada (federalism-ka ama dowlad wadaajinta sida Kenya ka jirta oo kale), tani oo muujineysa in adeegyada dowladda dhexe ay ajnabi ka yihiin gobollada dalka.